Nayakhabar.com: होशियार ! मिठाई खादैँ हुनुहुन्छ की ? 'मिठाईमा मन्द बिष'
होशियार ! मिठाई खादैँ हुनुहुन्छ की ? 'मिठाईमा मन्द बिष'
पोखरा । अखाद्य वस्तुको मिसावट नियन्त्रणसम्बन्धी छुट्टै ऐन नभएका कारण मिठाई व्यापारीले अखाद्य वस्तु मिसाउने छुट पाइरहेका छन् । एउटा व्यक्तिले एकपटक गोली हान्यो भने एकजना व्यक्ति मर्छ । एउटा व्यापारीले एकपटक अखाद्य वस्तु प्रयोग गरी तयार पारेको मिठाईले सयौँ व्यक्ति रोगी बनी मर्न सक्छन् ।
विश्वभर खाद्य सुरक्षाको बहस चलिरहँदा साथै स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार संविधानमै उल्लेख भइरहँदा नेपाली उपभोक्ताले मिठाईमा गम्भीर अव्यवस्था र दण्डहीनता भोग्नु परिरहेको छ ।
दूषित, न्यून गुणस्तर र मिसावटयुक्त मिठाई बजारमा खुलमखुल्ला बिक्री–वितरण भइरहेको छ । हेर्दाखेरी राम्रो देखिने गरी सजाएर उपभोक्तालाई झुक्याई व्यापारीले मन्दविष खुवाइरहेका छन् । खुवाबाट बनाइएका भनिएका मिठाई पिठो मिसाएर बनाइएका छन् ।
खुवाको मूल्यमा पिठो बिक्री भइरहेको छ । त्यसमाथि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने अखाद्य रङ र रसायन प्रयोग गरेर मिठाई तयार गरी बिक्री गरिँदै छ ।
मिठाईलाई फुलाउन, आकर्षक बनाउन, दूधबाट नबनेका परिकारलाई शुद्ध गाईभैंसीको दूधबाट बनेको भनेर देखाउन, महँगो केशर राखिएको भनेर झुक्याउन, गुलाफ ल्वाङ सुकुमेल हालेको बास्ना देखाउन विभिन्न अखाद्य रङ, हाइड्रो, सोडियम बाइकार्बोनेट, मेलामाइन, कृत्रिम सुगन्धलगायत विभिन्न अखाद्य केमिकल प्रयोग भइरहेको छ । त्यस्तै, गुलियो बनाउन चिनीभन्दा सस्तो रसायन साकारिन प्रयोग भइरहेको छ ।
मिठाईलाई आकर्षक बनाउन सुनचाँदीको जस्तो देखिने गरेर खान नमिल्ने आल्मुनियमको तपक अत्यधिक प्रयोग भइरहेको छ । जेरी, पुरी, निम्की, कचौरी, समोसा, चप, पकौडा तयार गर्दा लामो समयसम्म पटक–पटक पुरानै तेलमा पकाउने गरिएको छ । यसरी तयार भएका मिठाई बजारमा बिक्री गरिनु भनेको उपभोक्तालाई मन्दविष खान बाध्य पारिनु हो ।
उपभोक्ताले मिठाईसँगै मन्दविष खाइरहँदा यसको नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग टुलुटुलु हेरिरहेको छ । थुप्रै मिठाई पसल दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेका छन् । मिठाई पसल कतिवटा छन् भन्ने नियामक नियकायलाई नै थाहा छैन ।
मिठाईको गुणस्तर नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको नियामक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण अखाद्य वस्तु प्रयोग गरी तयार गरिएका मिठाई फोहोर भाँडामा खुला रूपमा सजाएर राखी बिक्री गरिएको पाइन्छ । यसका साथै मिठाईमा सोझै धुलो उडेर परिरहेको, झिँगा भन्किरहेको र बासी मिठाई बिक्री वितरण भइरहेका छन् ।
नाम चलेका मिठाई पसलले मिठाईको मूल्यमा पनि उपभोक्तालाई लुटिरहेका छन् । एउटा लालमोहनको मूल्य कुनै पसलमा १५ रुपैयाँ छ भने कुनै पसलमा ४० रुपैयाँसम्म पर्छ । एउटै साइजको लालमोहनमा यत्रो फरक कसरी पर्‍यो रु एक पाउ जेरीको कुनै पसलमा ८० रुपैयाँ र कुनै पसलमा १८० रुपैयाँ कसरी भयो रु
जेरी सामान्यतया पिठो, चिनी र तेलको प्रयोग गरी बनाइन्छ । एक किलोमा पाँच सय रुपैयाँको अन्तर कसरी गर्न पाइन्छ रु एक पाउ जेरी तयार गर्न कति खर्च लाग्छ रु कति रुपैयाँमा बिक्री गर्न पाउने हो रु त्यतातिर नियामक निकायले ध्यानै दिएको छैन । उपभोक्ता गुणस्तरका साथै मिठाईको मूल्यमा पनि ठगिइरहेका छन् । उपभोक्ता मूल्यमा नठगिऊन् भनेर मिठाईको मूल्य विश्लेषण, नियमन र नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।